भरतपुर सामुहिक आत्महत्या प्रकरणः सैनिककी श्रीमतीले लेखेकी थिइन यस्तो अन्तिम म्यासेज - बडिमालिका खबर
बुटवल– ‘बाबा घर आउनुस न, किन आउनु हुन्न् ? किन यसरी हामीलाई दुख दिनुहुन्छ ? छोराछोरीले यस्तो सुसाईट नोट लेखेर बाबाप्रति विलौना गरेका छन् । भरतपुरमा एउटै परिवारका तीनै जनाले एकै साथ झुण्डिएर आत्माहत्या गरेको घटना सुनाउँदै जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुशीलसिंह राठौरले भने । उनले थपे– ‘उनकी आमाले श्रीमानलाई लेखेको म्यासेज सेन्ट गर्न नपाई ज्यान गएको देखिन्छ’ राठौरले भने– ‘ श्रीमानले सुख–दुःख नहेर्ने र शंका मात्रै गर्ने गरेको पीडा सहन नसकेर श्रीमती र उनका दुई सन्तानले समेत एकैसाथ आत्महत्या गरेको देखिन्छ ।’ शुक्रवार बिहान भरतपुर नगरपालिका–१८, शशिनगरस्थित ३५ वर्षीया आमा माया आलेमगर, उनका १५ वर्षीया छोरी विनिता आलेमगर र १३ वर्षीय छोरा विवेश आलेमगरले गएराती आफ्नै घरको एउटै कोठा, एउटै बलोमा सलको पासो लगाई झुण्डिएर आत्महत्या गरेका थिए ।
श्रीमतीप्रति अनेक शंका र लान्छना लगाउने गरेको र छोराछोरीको पठनपाठन र हेरचाहमा वेवास्ता गर्ने गरेको सुसाईट नोट र श्रीमतीको म्यासेजले देखाएको राठौरले बताए । त्यस वडाका कार्यवाहक वडाध्यक्ष जितु तामाङ्गले आफु यस दुःखद घटना बुझ्न उनीहरुको घरमा गएको र अहिले शव पोष्टमार्टमका लागि जान लागेको बताए । राताेपाटी बाट